IZIMVO EZINGAMA-80 EZIGQWESILEYO ZOGCINO LWEZIXHOBO-IIYILO ZEGARAJI EZICWANGCISIWEYO - UYILO LWEKHAYA
Iiplani ezili-122 eziPhambili zoGcino lwezixhobo eziLungeleleneyo- Uyilo lweGaraji
Uninzi lwethu lujonga kwiindawo zethu zokugcina ngomxube wetyala kunye noloyiko.
Ewe sifuna ukugcina ngokufanelekileyo kwaye silungelelanise izixhobo zethu kunye neemfuno ezahlukeneyo, kodwa amaxesha ngamaxesha izinto ezinjalo zidibanisa ukungqubana okukhoyo sonke sikhalipha ngokukhalipha nanini na xa umsebenzi ufuna ukuba siwuqwalasele.
Ngethamsanqa, amakhaya anamhlanje athathela ingqalelo imfuneko yeeyunithi ezifanelekileyo, kwaye nangaphezulu, zifuna ukubandakanya ezo yunithi kwisibheno ngokubanzi sendlu yakhe kunye nomhlaba omkhulu.
Ukusuka kwiibhokisi zezixhobo eziqengqelekayo ukuya kukhetho oluninzi lwe-DIY, akukho zinqongophala zeendlela onokuzigcina ngazo ixesha, uxinzelelo kunye nendawo ngegrisi encinci yendalo. Iingqayi zamasoni ezixhonywe eludongeni kunye neeshelfu zamakhreyithi enkuni, iihingi kunye nezikhonkwane kunye neerali zencopho; ezi zifikeleleka ngokulula kwaye zifakwe ngokulula, ukuya kuthi ga kwizikhongozeli zokugcina isilingi. Nditsho nekhabhathi ezihonjisiweyo kunye nezixhobo zemagneti zinokuphunyezwa ngokulula kwaye ngaphandle kwendleko, kwaye zinike iminyaka yokusetyenziswa kunye namandla okugcina ngokwaneleyo.
Masijongane nayo, kunzima ukuthanda imfuno yekhaya yokugcina eyaneleyo, ngakumbi xa kuziwa kwizixhobo nakwizixhobo zegaraji. Ngelixa ngokuqinisekileyo kukho iindawo ezinomtsalane ngakumbi ukuseta izinto ozithandayo, akukho nto inokuphika ifuthe lenguqu kwezi zixhobo zilungileyo zokugcina izimvo kunye nokuseta uyilo. Igaraji yakho okanye igumbi lokusebenzela alidingi ukuba libe yindawo engacacanga yeeprojekthi ezilahliweyo kunye noluhlu lokuhlamba iimpahla osele uzibekile; ngezixhobo zokugcina ezifanelekileyo endaweni yazo unakho konke ukujongana nezo zenziwe nge-gusto entsha.
1. Ezona Zona zixhobo ziLungileyo zokuGcina
Ukuba unetafile ende yokusebenza kwivenkile yakho, kunokwenzeka ukuba kukho indawo engasetyenziswanga phantsi kwayo. Yenza okona kulungileyo ngokuchitha indawo ngokwakha iseti yeetyhubhu eziza kuququzelela zonke izixhobo zakho zamandla.
emnyama rose tattoo intsingiselo
Le khabhathi yesixhobo samandla imalunga nokusebenza, hayi ifom. Yakhiwe ngeplanga ye-¾-intshi, iyenza yakhiwe ngokulula kwaye ifikeleleke. Ukuyakha, fumana izixhobo zakho zamandla ezona zinkulu kwaye uyile iityibbies zazo kuqala. Nje ukuba ufumane ubungakanani obukhulu, qhubeka ugcwalisa indawo ngokwahlulahlula, ukubethelela okanye ukujija ngebhodi ephezulu, ezantsi kunye nephakathi.
Ngamanye amaxesha ezona zinto zilula zokwakha zezona zisebenzayo. Olu donga lwezixhobo lusebenzisa ngokugqibeleleyo iphepha leplywood, amanye amaplanga, kunye nezikhonkwane ezimbalwa ezibekwe ngobuchule.
Ukunciphisa uxinzelelo, beka iplywood ngokuthe tyaba kwaye uqalise ukubeka izixhobo kuyo. Kuya kuba lula kakhulu ukuzibeka kwaye ubone ukuba zeziphi izinto ezihambelana apho ngaphandle kokuzibethelela ukuze uzigcine endaweni. Nje ukuba wanelisekile, phawula iplywood apho amagwegwe okanye iinzipho kufuneka zibe khona kwaye uthathe umfanekiso. Nje ukuba uxhome ibhodi, uya kwazi kakuhle ukuba yonke into yeyiphi.
Olu donga lwesixhobo sase-french-cleat luyindlela elungileyo yokulungiselela izixhobo zamandla ezimbalwa kunye nezixhobo abazifunayo. Inkqubo ye-cleat yomelele kwaye kulula ukuyenza ngokwezifiso.
Sika ii-strips zamaplanga okanye i-plywood kwitafile etyheliweyo kunye ne-blade ethe tyaba ukuya kuma-45 degrees. Hlanganisa le micu ukusuka kwizikhonkwane zodonga kunye nobuso bentsimbi ejonge phezulu kwaye ijonge eludongeni. Ukufakela umtya ohambelanayo kwi-caddies nakwikhabhathi kuyabavumela ukuba babambelele kwimitya eseludongeni. Emva koko ungaphakamisa, utyibilikise, uhambise, kwaye ubeke endaweni yazo ngokulula njengoko iimfuno zakho zitshintsha.
Ukuba usebenzisa i-caulking guns rhoqo kwivenkile yakho, ezi holsters ziya kuza ziluncedo. Ekugqibeleni iya kuba yinto yesibini ukufikelela ngaphezulu kwenye kwaye uyitshintshe xa ugqibile.
Yenza ezi holsters ngombhobho wePV ye-3-intshi. Qhuba umngxuma kwisiphelo ngasinye kuwo omabini amacala ombhobho usebenzisa isuntswana lokumba ixesha elide. Sebenzisa ixesha elincinci lokuqhuba ukuqhuba isikrufu kwindawo yakho enyukayo evela ngaphakathi kumbhobho. Kuxhomekeke kububanzi bomngxunya owugobileyo, ungadinga ukulungelelanisa iwasha ngaphezulu kwentloko yentloko. Ezi holsters aziyi kuya naphi kwaye ziya kuhlala ixesha elide.
Le nkqubo yokugcina izinto zeglu kunye nezinto zokuncamathelisa iyakhazimla, ngakumbi kwiveni yomsebenzi okanye kwinqwelwana erhuqwayo. Le nkqubo izakugcina iityhubhu zingashukumi yonke indawo kwaye zenze ubumdaka okanye zilahleke.
Sika ubude be-2-intshi kunye ne-3-intshi ye-PVC ngesiphelo esinye se-beveled. Unako ukubhola kwaye ujije ngesiphelo esine-beveled kwi-backer yakho. Gqobhoza umngxuma macala omabini ombhobho kufutshane nesiphelo saso esisezantsi, kodwa musa ukuntywila isikrufu yonke indlela. Yishiye ibhongo nge-½-intshi ubuncinci. Oko kuya kunika iityhubhu into yokuhlala ngaphandle kokuwa kumbhobho. Unokuthenga kwaye uncamathisele iminqwazi efanelekileyo ye-PVC ukuvala i-bottoms zetyhubhu.
Ukugcinwa kwe-Chainsaw kunokuba yingxaki. Ukuba uzibeke eshelufini, ziya kuthatha yonke loo nto okanye uya kubetha ezinye izinto ngalo lonke ixesha usiya kuzithatha .. Le shelufu yokubeka nkqo ilukhetho olukhulu oluthatha indawo encinci kwaye igcine ngaphandle kwendlela.
Le shelufu yakhiwe ngomthi okrwada kwaye ijijelwe ngokulula kudonga lwepaneli. Emva kokuba wakhe ishelufu, eyona ndlela ilula yokusika ii-grooves kwimivalo kukutshisa isarha kwaye wenze ugcino olumbalwa kwibhodi yeshelfu. Uyakufuna ukuba ishelufu ilungiswe eludongeni kuqala. Ngale ndlela ukhuselekile kwaye ayizukukhaba kuwe. Kwakhona, ukuba ugcina iisarha zakho ngokuthe nkqo, kucetyiswa ukuba ucoce onke amanzi kulwelo kuqala.
Iseti elungileyo yeetshisi inokuba ngumhlobo osenyongweni womsebenzi weplanga. Ukuba nazo kumboniso akukho lula kuphela kodwa kujongeka kukuhle kwivenkile elungelelanisiweyo.
Ishelfu yeshelisi yakhiwe nge-plywood ye-¾-intshi. Kuqala, beka iichizels zakho ngaphandle ukuze wazi ukuba uya kuba nesithuba esingakanani phakathi kwezibambo. Gcina ukhumbula ukuba kufuneka kube lula ukubamba kunye nokutshintsha. Emva koko bhala umngxunya we-intshi ye-intshi kwisisele ngasinye kwindawo efanelekileyo. Eyona ndlela ilula yokusika iigrooves isetafileni yesarha, kodwa ukuba awunayo, ungasebenzisa isandla okanye ijigsaw ukusika.
Esi sisombululo sokugcina isixhobo sisixhobo esisebenzayo sokuhambisa izixhobo. Kukho izixhobo ezisetyenziselwa ukugcinwa kwithala ngalinye, okwenza oku kube lula ukuyila uyilo.
Eli ziko linokwakhiwa ngamaplanga ahlukeneyo, iplywood, okanye ipallet. Amashalofu akhiwe ngokukodwa kwiseti nganye yezixhobo kwaye ancanyathiselwe ngasemva kweslat. I-slats emva koko zajijwa kwisakhelo, zenza iyunithi enye eneshelufu eqinileyo yokugcina isixhobo kunye nokubonisa.
Zininzi izizathu zokuba ipegboard ibikade ikho ixesha elide: Ayibizi mali ininzi, isebenza kakhulu kwaye inokwenziwa ngokwezifiso kakhulu. Olu luvo lokugcina isixhobo luyindlela elungileyo yokufumana ukugcinwa okuninzi kwindawo encinci.
Endaweni yeengcango ezixhonyiweyo, le khabinethi ineengcango ezityibilikayo ngeepaneli zebhodi yangaphakathi. Oku kuliphinda kabini inani lomgangatho wephebhodi okhoyo wokugcina kwaye inika umbutho kwigaraji. Ishelufu engaphantsi kwekhabinethi ilungele ukubamba imigqomo egcwele amandongomane, iibholiti, izikrufu, kunye nezinye izinto ezihlala zisasazeka phantsi kwevenkile.
Le nkqubo yokucoceka isisombululo esinomtsalane nesiluncedo sokugcina izixhobo. Ishelfu nganye yenzelwe ukuba ilingane isixhobo esithile kwaye ihlale phakathi kweebhodi ezijijelwe ngokuthe tye kwisakhelo.
Le nkqubo yenziwe ngokwezifiso kakhulu kwaye ijongeka imangalisa. Ungayakha nakweyiphi na into kodwa iibhodi zomthi eziqinileyo zezona zilula kuba kusenokwenzeka ukuba awuzukuzikrazula kububanzi. Thatha ixesha lakho kwaye wakhe ishelfu nganye ngononophelo kusetyenziso olucwangcisiweyo. Olu luhlobo lweprojekthi onokuthi ubonise ubugcisa bakho kunye nokuqwalaselwa kweenkcukacha ngayo.
Imitha wabona izikhululo zinokuba ngumgcini-umva kwaye zonyuse imveliso kunye nokuhamba komsebenzi. Ukuba nendawo enikezelweyo yesarha yakho enzima kukugcina ungakhuphi kwikona yevenkile yakho uye kwelinye.
Esi sikhululo sesikhululo se-miter esilula sinika itoni yokugcina kwiikhabhinethi ezintathu. Izimvo zezixhobo zokugcina izixhobo ezinje ngoku zinika amakhaya izixhobo zakho zamandla ezibaluleke kakhulu nezihlala zisetyenziswa. Ukuncamathisela iishelufa kwizilayidi zedrowa kwenza ukuba kube lula ukufumana isixhobo osifunayo kunye nokusibeka xa ugqibile.
Le drill bit caddy yeyona nto ifanelekileyo eludongeni emva komatshini wakho wokuprinta. Uya kuhlala unayo into oyifunayo ngesandla kunye nokufikelela kwiingalo. Iya konyusa ukuhamba kwakho kwaye ugcine impilo yakho.
Olu khetho lokugcina kulula ukuphindaphinda. Eli ziko elithile lakhiwe nge-oki ebomvu namhlophe. Iqukethe amashalofu okwakhiwa ngokulula ajongene nobuso kumqolo oqinileyo weplanga. Qaphela ukugcina yonke into kwinqanaba kunye nesikwere ukuze ibonakale intle kwaye ingakuphazamisi emsebenzini osele uwenzile.
Le bhentshini yokusebenza inokuba neMecca yokugcina izixhobo ngesandla. Kukho iishelfu ezizimeleyo kunye neekhabhathi kwiseti nganye yezixhobo, kodwa akukho nto igcinwayo okanye ifihliweyo. Ayisiyiyo kuphela le workshop igcinwe kakuhle, kodwa icwangciswe kakuhle kangangokuba phantse ibe ngumsebenzi wobugcisa.
Ukuphindaphinda oku kujonga kuya kuthatha ixesha elininzi, uyilo kunye nocwangciso. Isiphumo siya kulunga umzamo, njengoko uya kufumanisa ukuba zonke izixhobo zakho kubude beengalo ziya konyusa ukuhamba kwakho komsebenzi kalishumi.
Awusoze ube nezando ezaneleyo, kodwa umba uza xa uphuma kwigumbi lokuzigcina. Le yindlela elula yokwenza umsebenzi okhawulezayo wokugcina isando.
Izibiyeli ezimbini zomthi ziqhotyoshelwe eziphelweni zebhodi ehamba umgama ofanelekileyo. Iingqimba ezimbini ezinesiqingatha zisikiwe ukusingathwa kombhobho we-conduit we-3/4-intshi. Oku kubonelela ngeshelufu eyomeleleyo yokuhambisa isando endaweni yokuzifaka emazantsi edrowa.
Iikhadibhodi zepegboard zongeza ngokugqwesileyo ivenkile yegaraji. Banikezela ngokugcina okuninzi kwizithuba ezingafane zisetyenziswe. Ezi zihlalo zimi nkqo xa zigcinwe kude kwaye zisuswa ngokulula xa ufuna izixhobo ezizigcinayo.
Isitshixo sokwenza lo msebenzi uyilo kukusika ii-grooves kwiibhodi eziphezulu nezisezantsi kwisakhelo sekhabhathi ukufumana iphegibhodi kwaye igcinwe endaweni. Ngaphandle kwemijelo, i-pegboard iya kuphelela nje, kwaye uninzi lwezixhobo ozibeke ngononophelo ziya kusasazwa kumgangatho wevenkile yakho.
Olu luvo lokugcina utsalo yeyona ndlela ilunge ngakumbi yokuhlela iiwrenche zakho kunokuba uzifake kwibhokisi yezixhobo. Uyakwazi ukufumana utsalo olifunayo kwiqhezu lexesha. Uya kuba nakho ukuxelela xa umntu engekho.
Olu luyilo olulula kwaye lunokufezekiswa kwitafile enesilingi. Kuyanceda ukugcina isithuba esilinganayo phakathi kwemijelo, ke phawula ibhodi yakho apho ufuna khona imijelo, kwaye wenze uphawu oluhambelanayo kwisileli sakho esinqamlezileyo. Bhalisa la manqaku mabini ngaphambi kokuba udlulise umsebenzi kwi-blade. Kuya kufuneka wenze ukupasa okumbalwa, kodwa ngamanqaku abekiweyo ngononophelo, uya kuba nakho ukuphumeza i-wrench rack engaguquguqukiyo kwaye entle.
Ibhokisi yokugcina iplisi kwinkqubo yesiFrentshi-yokucoceka yeyona ndlela ifanelekileyo yokugcina izixhobo ezingafunekiyo ngaphandle kokuzibeka edreyini. Ibhokisi yeplywood ixhomeke kwinkqubo yokucoceka, ukuze uyitsale ibhokisi xa uyidinga kwaye uyibuyisele endaweni yayo xa ugqibile.
Ulwakhiwo lwenziwe ngeplywood ngamaplanga e-inch-intshi ngenxa yoko ayizukubiza mali ininzi ukuyakha. Iiplothi zibambe nkqo ngentonga yentsimbi efakwe embindini wenqanaba ngalinye. Eyona ndlela ilula yokuyiphindaphinda kukusika zombini iziphelo zebhokisi yakho, uzicofe kunye, kwaye uzibole kuzo zombini iziphelo ngexesha elinye. Intonga iya kuhlala ngokulinganayo kwaye igcine iipleyisi zakho zingagqithi.
Izitampu zokwenza izinto zesikhumba ezinje ngasentla zingumceli mngeni wokuchonga nokuba zikumboniso okhangayo ngolu hlobo. Le rack inamanqanaba amathathu eshelufa kwimilenze.
Phinda usebenzise ezi shelufu ngokusebenzisa amaplanga anobungakanani kunye nomatshini wokuprinta. Cwangcisa ubunzulu ukuze ungabhobozi yonke indlela kwiishelufa. Oku kuya kunika izitampu into ezantsi ngaphandle ngelixa uzibambe nkqo ngokuchonga okulula.
Iingcamango zokugcina izixhobo zegadi njengaleyo ifanekisiweyo yenza ukuba izixhobo zakho ezingathandekiyo zingabinangxaki. Esi sixhobo sibamba isixhobo ngasinye emhlabeni, sisigcina singawi kwaye nawe ungakhubeki kuso.
Amaplanga ubukhulu yinto efanelekileyo yomsebenzi onje. Ungafumanisa ukuba ukusika i-slots kuya kuba lula ngokuqala ngomhlakulo omkhulu okanye nge-Forstner bit kwaye ugqibezele ukusika nge-jigsaw. Oku kuya kukunika iziphumo ezinokuhanjiswa ngelixa ungathathi usuku lonke ukulufeza.
Isitayile esibomvu kunye esimnyama
2. Izixhobo zoGcino lwezixhobo ze-DIY
Umthombo: @ekstromslojd nge-Instagram
Umthombo: @urbanshopworks nge-Instagram
3. Iingcamango zokuGcina isiXhobo seGaraji
Umthombo: @ _welcome.to_.my_.garden_ nge-Instagram
Umthombo: @ a.dabbled.dwelling nge-Instagram
Umthombo: @afreshspace nge-Instagram
Umthombo: @bike_park_leith nge-Instagram
Umthombo: @proslatgarage nge-Instagram
Umthombo: @soandoandoil nge-Instagram
Umthombo: @sortbychelsea nge-Instagram
Umthombo: @uniquelyannaca nge-Instagram
Umthombo: @visionsfrommyfrontporch nge-Instagram
Umthombo: @whatwoodbradbuild nge-Instagram
4. Izimvo zoMbutho oClever
Umthombo: @daisy_tempest nge-Instagram
zibuhlungu kangakanani ii-ankle tattoos
Umthombo: @kjr_builds nge-Instagram
Umthombo: @slylysimpleorganizing via Instagram
Umthombo: @ Valleywood107 nge-Instagram
5. Iingcamango zoGcino lwezixhobo zodonga
Umthombo: @hobbysnedkeren nge-Instagram
Umthombo: @jonas_projects nge-Instagram
Umthombo: @jp_woodwork nge-Instagram
Umthombo: @pegprohooks nge-Instagram
Umthombo: @rabideauwoodworking nge-Instagram
Umthombo: @tim_ashfield nge-Instagram
Umthombo: @tonytimonere nge-Instagram
Umthombo: @uncutpoplar nge-Instagram
Umthombo: @vkvcostumedesigner nge-Instagram
Umthombo: @ wannes.vanwijnsberghe nge-Instagram
Umthombo: @Ideas nge-Instagram
6. Iingcamango zeThuluzi lokuGcina izixhobo
Umthombo: @ 3d_diy_dave nge-Instagram
Umthombo: @ 4eyedimensions nge-Instagram
Umthombo: @dash_made_woodworking nge-Instagram
Umthombo: @ dennis.s2018 nge-Instagram
Umthombo: @foozleface nge-Instagram
Umthombo: @jolleydiy nge-Instagram
Umthombo: @matmakinthings nge-Instagram
Umthombo: @samcraftcom nge-Instagram
7. Iingcamango zoGcino lwezixhobo zeBenbench
Umthombo: @beeorganizedsfbay nge-Instagram
Umthombo: @benchtopwoodworks nge-Instagram
Umthombo: @garyloganphoto nge-Instagram
Umthombo: @hughes_metalwork nge-Instagram
Umthombo: @izzyswan_woodworking nge-Instagram
Umthombo: @moeller_lemmen nge-Instagram
Umthombo: @motorbolt nge-Instagram
Umthombo: @ mrwoody888 nge-Instagram
Umthombo: @ simplyjonathan.me_ nge-Instagram
Umthombo: @toolfancro nge-Instagram
Iimpawu zomntwana zomntwana zootata
abafana abaneenwele ezinde ezinde
iiTatto ezimnyama nezimvi ngombala
iiwotshi ezilungileyo kakhulu zamadoda
indlu yokuhlambela emnyama nomhlophe
iiTatto zomlenze ezisezantsi zabafana